६० प्रतिशतले चुक्तापूँजी बढाएको एशियनको नाफा २६ प्रतिशत बढ्यो
भदौ १, काठमाडौं (अस) । गत आव २०७५/७६ मा एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सले २६ प्रतिशत नाफा वृद्धि गरेको छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको गत आवको चौंथो त्रैमासको वित्तीय विवरण अनुसार अघिल्लो आव २०७४/७५ मा रू. ४ करोड ६० लाख नाफा गरेको कम्पनीले गत वर्ष रू. ५ करोड ८२ लाख नाफा गरेको हो । कम्पनीले गत वर्ष ६० प्रतिश...
एनएमबि बैंकले किनेको ओम डेभलपमेण्टको वितरण योग्य नाफा ४५ करोड
भाद्र १, काठमाडौं (अस) । एनएमबि बैंकसँग विलय हुन लागेको ओम बैंक लिमिटेडले आव २०७५/०७६ को वित्तीय विवरण एनएफआरएस अनुसार सार्वजनिक गरेको छ । बैंकको गत आवमा वितरण योग्य नाफा रू. ४५ करोड ७३ लाख रहेको छ । बैंकले यसबाट शेयरधनीहरुलाई लाभांश दिन सक्छ । बैंकले गत आवमा रू. ५५ करोड ६ लाख नाफा कमाएको छ...
सिभिल बैंकको वितरण योग्य नाफा ५५ करोड
भदौ १, काठमाडौं (अस) । सिभिल बैंक लिमिटेडले आव २०७५ /०७६ को वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले गत आवको नाफाबाट शेयरधनीहरुलाई रू. ५५ करोड ६९ लाख नाफा वितरण गर्न सक्ने छ । बैंकले गत आवमा रू. ७६ करोड ४ लाख नाफा कमाएको छ । यो अघिल्लो आवको तुलानमा २० प्रतिशत बढी हो । अघिल्लो आवमा बैंकको ना...
एक्सेल डेभलपमेण्टको खुद ब्याज आम्दानी ३८ करोड ११ लाख
भदौ १, काठमाडौं (अस) । एक्सेल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडले आव २०७५/०७६ को वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । बैंकको खुद ब्याज आम्दानी अघिल्लो आवको तुलनामा १२ प्रतिशत बढेर रू. ३८ करोड ११ पुगेको छ भने सञ्चालन मुनाफा २ प्रतिशत बढेर रू. २१ करोड ८१ लाख पुगेको छ । बैंकले गत आवमा रू. १६ करोड...
८.७३ अंकले घट्यो नेप्से परिसूचक (२ बजेको अपडेट)
भदौ १, काठमाडौं (अस) । साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतवार नेप्से कारोबार भएको तेस्रो घण्टामा ८ दशमलव ७३ अंक घटेर १ हजार २१५ दशमलव ३० विन्दुमा पुगेको छ । १ हजार २२३ दशमलव ५१ विन्दुबाट शुरु भएको परिसूचक कारोबारको पहिलो एक घण्टामा थोरै अंकले बढेपनि सो पछि निरन्तर रुपमा घटिरहेको छ । आइतवार तेस्र...
युनाइटेड फाइनान्सको वितरण योग्य नाफा ८ करोड
भदौ १, काठमाडौं (अस) । युनाइटेड फाइनान्स लिमिटेडले आव २०७५/०७६ को वित्तीय विवरण एनएफआरएस अनुसार सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले गत आवको नाफाबाट शेयरधनीहरुलाई रू. ८ करोड १० लाख नाफा वितरण गर्न सक्नेछ । कम्पनीले गत आवमा रू. १३ करोड ३२ लाख नाफा कमाएको छ । यो अघिल्लो आवको तुलानमा ८७ प्...
ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको ४३ लाख बीमा शुल्क आर्जन
भाद्र १, काठमाडौं (अस) । ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आव २०७५/७६ मा रू. ४३ करोड ८६ लाख बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । गत वर्ष कम्पनीले १० हजार ८७९ बीमालेख कायम गर्न सफल भएको छ । हाल कम्पनीमा ७ हजार ४७६ बीमालेख कायम रहेको छ । गत आवमा कम्पनीको नाफा थोरै वृद्धि भएको छ । अघिल्लो आव २०७४...
सहारा विकास बैंकको चुक्तापूँजीमा उल्लेख्य वृद्धि
भदौ १, काठमाडौं (अस) । अघिल्लो आव २०७४/७५ को तुलनामा गत आव २०७५/७६ मा सहारा विकास बैंकले चुक्तापूँजी उल्लेख्य मात्रामा बढाएको छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको गत आवको चौंथो त्रैमासको वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ७ करोड २९ लाख ९४ हजारदेखि बढेर रू. १६ करोड ३३ लाख ६६ हजार पुगेको छ । कम्पनी...
सानीमा लाइफको जीवन बीमा कोष ४ गुणाले बढ्यो
भदौ १, काठमाडौं (अस) । सानीमा लाइफले गत आव २०७५/७६ मा बीमा कोष रकम १३४ दशमलव ४२ प्रतिशत अर्थात ४ गुणाले वृद्धि गरी रू. २२ करोड २८ लाख २६ हजार पुर्‍याएको छ । यो रकम अघिल्लो आव २०७४/७५ मा रू. ५ करोड ११ लाख ६२ हजार थियो । विमितहरुको बीमा बापतको रकम यस कोषरमा राख्ने गरिन्छ । गत वर्षसम्म क...
१२१९.३१ विन्दुमा नेप्स परिसूचक (१ बजेको अपडेट)
भदौ १, काठमाडौं (अस) । साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतवार नेप्से कारोबार भएको दोस्रो घण्टामा ४ दशमलव ७३ अंक घटेर १ हजार २१९ दशमलव ३१ विन्दुमा पुगेको छ । १ हजार २२३ दशमलव ५१ विन्दुबाट शुरु भएको परिसूचक कारोबारको पहिलो घण्टामा थोरै अंकले बढेपनि दोस्रो घण्टामा शून्य दशमलव ३९ प्रतिशत घटेको हो । ...